Top 5 Ghế gaming tốt được game thủ ưa chuộng nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 Ghế gaming tốt được game thủ ưa chuộng nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Siyini isihlalo sokudlala? Yini okufanele uyiqaphele lapho ukhetha isihlalo sokudlala? Futhi yiziphi izihlalo ezingcono kakhulu zokudlala? Lena inkinga abadlali abaningi abakhathazeke ngayo kakhulu namuhla. Uma uzibuza ngalolu daba, sicela ubheke esihlokweni Sokubuyekezwa kwe-Phong ngezansi ukuze ubambe okungu-6 okuphezulu isihlalo sokudlala kahle, ethandwa kakhulu!
1 Siyini isihlalo sokudlala?
2 Indlela yokukhetha isihlalo sokudlala esifanele
2.1 Khetha isihlalo ngokusekelwe entengo
2.2 Khetha ukuthenga isihlalo sokudlala esisekelwe kumklamo
2.3 Khetha ukuthenga isihlalo esekelwe indaba
2.4 Khetha isitulo se-recliner ngesici
3 Izihlalo ezi-6 ezidume kakhulu zokudlala ezinhle
3.1 1. Ewin Calling Series CLE Gaming Chair
3.2 2. Isihlalo sokudlala se-Phong Vu Alpha Gamer AGPOLARISRE-BK-CHEAP
3.3 3. Isihlalo sokudlala se-Extreme Zero
3.4 4. I-Dxracer Racing Pro Series OH/RV131/NR . Usihlalo Wokudlala
3.5 5. Isihlalo sokudlala i-BG E-01
3.6 6. E-DRA EGC204 . Usihlalo Wegeyimu
Siyini isihlalo sokudlala?
Isihlalo sokudlala kodwa izihlalo ezikhethekile zenzelwe abadlali bamageyimu. Lo mugqa womkhiqizo uvele emakethe ngo-2006, 2007 futhi ngokushesha wathola impendulo eminingi eyakhayo evela emphakathini wamageyimu waseVietnam.
Izihlalo zokudlala ziyacwaningwa futhi zenziwa ngokusekelwe emigqeni yobuchwepheshe obuphambili nesimanje, kodwa futhi ziye zahlolwa kakhulu ngaphambi kokulethwa kubasebenzisi. Izivivinyo zosuku ziletha okuhle kakhulu kubadlali bamageyimu.
Indlela yokukhetha isihlalo sokudlala esifanele
Ukuze ukwazi ukukhetha isihlalo esifanele sokudlala, ukunikeza umuzwa okhululekile kakhulu lapho udlala imidlalo isikhathi eside, udinga ukusekelwe kulezi zindlela ezibalulekile ezilandelayo:
Khetha isihlalo ngokusekelwe entengo
Into yokuqala okudingeka uyinake intengo yomkhiqizo. Njengamanje, izihlalo zeGaming zicebile kakhulu, kunezihlalo ezibizayo nezishibhile, kuye ngokuthi umthengi onemali eyanele yokukhetha imodeli yesitulo esifanelekile.
Uma ungumuntu oqeqeshiwe noma ungumtshali-zimali, khetha isihlalo esinomklamo owubukhazikhazi, otholakala esigabeni esisezingeni eliphezulu njenge: AKRacing, Noble Chair kanye neDXRacer. Lawa amamodeli angu-3 ezihlalo zemidlalo ezitholakala esigabeni kusukela ezigidini ezingu-7 kuya kwezingu-20.
Uma ungumuntu odinga ukutshala imali kakhulu kodwa udinga ukuthi isitulo sibe nemisebenzi ehambisanayo, ikhwalithi enhle kodwa intengo emaphakathi, bese ukhetha ukuthenga izihlalo zeQhawe, i-E-DRA, i-Ace Gaming. Izintengo zalezi zinhlobo zisebangeni le-VND eyizigidi ezi-3 kuye kweziyi-6 ngomkhiqizo ngamunye.
Futhi uma ukhetha imodeli yesitulo etholakala engxenyeni esezingeni eliphansi, iSitulo Semidlalo esivamile nje, ngaphandle komsebenzi futhi ngaphandle kokudinga ifomu, izobukeka njengezihlalo esitolo senetha. Intengo yalezi zimoto ivamise ukuba ngaphansi kuka-1 million.
Khetha ukuthenga isihlalo sokudlala esisekelwe kumklamo
Emakethe namuhla, kunamamodeli amaningi ahlukene ezihlalo zokudlala, ahlukahlukene ngokuklama nombala. Uma uyindoda ethanda ubulula, kufanele ukhethe izihlalo ezingenalo ukwakheka okuningi okunolaka, imibala emnyama namalogo kuphela.
Uma uthanda into entsha, zama ukukhetha izihlalo ezinemibala emnyama nemhlophe, ebomvu nemnyama ukuze ugweme isithukuthezi ngesikhathi sokusetshenziswa. Uma ungowesifazane, ungakhetha obomvana noma omnyama nomhlophe ukuveza ubuntu bakho.
Khetha ukuthenga isihlalo esekelwe indaba
Mayelana nezinto zokwakha, kufanele ukhethe izihlalo zemidlalo eziklanywe ngesikhumba sekhwalithi ephezulu ukuze uthole umuzwa okhululekile lapho uhlezi. Emakethe namuhla, kunemikhiqizo eminingi esigabeni esimaphakathi esiklanywe ngesikhumba se-PU sezinga eliphezulu noma engxenyeni ephezulu, ezokwenziwa ngesikhumba sangempela kodwa ibe nenani elibizayo.
Khetha isitulo se-recliner ngesici
Ezigabeni ezimaphakathi nezindawo ezisezingeni eliphezulu, Isihlalo Sokudlala Sivame ukuza ne-headrest kanye ne-backrest cushion ukuze kukhawulwe ubuhlungu beqolo lapho uhlezi. Kufanele ukhethe isihlalo sokudlala esingahle sihlaliswe, sizoba ngokunethezeka, izihlalo zokudlala ezingahlaliswa ngaphandle kokusetshenziswa kwemidlalo uma uyisisebenzi sasehhovisi ngesikhathi sekhefu lesidlo sasemini, ungakwazi ukuhlalisa isihlalo sakho bese ulala kahle kuleso sihlalo.
Ngaphezu kwalokho, iqiniso lokuthi isihlalo singanyakaziswa futhi sijikelezwe ngamasondo kuzoba lula kakhulu kunokuba uhlezi noma uphakamisa isikhathi ngasinye lapho ufuna ukuhambisa isikhundla sesihlalo.
Izihlalo ezi-6 ezidume kakhulu zokudlala ezinhle
Ungumdlali ovamile futhi ufuna isihlalo sokudlala esinomklamo omuhle nezici ezihlukahlukene, esinikeza ukunethezeka nokunethezeka okukhulu ngesikhathi sokudlala. Sicela ubhekisele kwabayisi-6 ngokushesha isihlalo sokudlala okuhle kakhulu, okufingqiwe ngokubuyekezwa kwe-Phong ngezansi.
1. Ewin Calling Series CLE Gaming Chair
I-Ewin Calling Series CLE iwumugqa wezihlalo zasehhovisi ezihlanganisa amageyimu athandwa abadlali abaningi futhi bakhethe ukuthenga ngenxa yomklamo wawo ngokuya ngejometri yomsebenzisi. Isihlalo silungele abasebenzisi abanobude obungu-160cm kuya ku-180cm kanye nokukwazi ukumelana nesisindo esikhulu impela, esifinyelela ku-150kg.
Isihlalo sokudlala se-Ewin Calling Series CLE Ngomklamo oqinile, uhlaka lwesitulo lwenziwe ngensimbi engagqwali yezinga eliphezulu futhi lushiselwe ndawonye, ​​bese lufuthwa ngopende olungaphandle lukapende osebenza ngogesi. Ngezansi kunesistimu ehlanganisa isisekelo esinamaphiko angu-5 anamaphiko kanye namasondo epulasitiki angu-6cm ekhwalithi ephezulu akwazi ukuhamba kalula.
Ngaphezu kwalokho, i-chassis yesihlalo sokudlala se-Ewin Calling Series CLE yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu futhi iklanywe ngesitayela sovemvane ehlanganiswe ne-4-level hydraulic lift shaft ekuvumela ukuthi ulungise kalula futhi Ushintshe ukuphakama kwesihlalo. ngenkathi ehlezi. Isici sokuhlehla se-155-degree silungele ukulala, ukuphumula nokuphumula njengokufunda, ukubuka amamuvi, njll.
Intengo yesithenjwa: 5,680,000 VND.
2. Isihlalo sokudlala se-Phong Vu Alpha Gamer AGPOLARISRE-BK-CHEAP
I-Alpha Gamer AGPOLARISOE-BK-R iyisihlalo sokudlala esisezingeni eliphezulu, esihlome ngesikhumba esiyimbobo esinezimbobo ukuze kungene umoya ezindaweni lapho ukushisa kuvame ukuvela khona uma uhlezi isikhathi eside kakhulu. Umkhiqizo uzizwa upholile, ukhululekile kakhulu futhi kumnandi ukuhlala isikhathi eside.
Isihlalo sokudlala se-Alpha Gamer AGPOLARISOE-BK-CHEAP Iphinde ifakwe uhlelo lwama-cushions akhiphekayo angu-2 okuhlanganisa i-headrest kanye ne-back cushion ukukusiza ukuthi uguquguquke kakhulu ngenkathi usebenzisa isihlalo. Uma ufuna indawo yokuhlala eqondile, vele ususe umcamelo. Isikhundla esinethezekile nesibushelelezi sidinga nje ukunamathisela umcamelo wesihlalo, kulula kakhulu. Vele udonse i-lever eceleni, isihlalo sizotshekela phansi ngokuzenzakalelayo futhi ungakwazi ukuphumula ngokunethezeka. I-backrest yesihlalo ivumela ukuthi umhlane uhlaliswe kuze kufike kuma-degree angu-180. Hhayi lokho kuphela, kodwa futhi ungalungisa ukuphakama kwesihlalo ngokuzenzakalelayo kufike ku-9cm.
Ngaphezu kwalokho, isihlalo sokudlala se-Alpha Gamer AGPOLARISOE-BK-R siphinde sibe nendawo yokubeka ingalo eyenza kube lula ukuyilungisa, ifanele zonke izinhlobo nosayizi bakho. Ukulungiswa kwe-4D okufana nalokhu: okuvundlile, ukuphakama, phambili, emuva nangaphakathi – ngaphandle kwenzeka kalula kakhulu futhi kalula.
Intengo yesithenjwa: 5,478,000 VND.
3. Isihlalo sokudlala se-Extreme Zero
Isici esivelele kakhulu sale modeli yesitulo sasekhaya se-Zero ukuthi inomklamo wezemidlalo obusha futhi oshukumisayo. Ngenani lebanga eliphakathi, kodwa ukuklama kanye nekhwalithi yesihlalo kuhle kakhulu okwenza abantu abasha abaningi bakhethe i-Extreme Zero X.
Isihlalo segeyimu engu-Extreme Zero X Kwenziwe ngokuphelele ngesikhumba se-PU sekhwalithi ephezulu, ikakhulukazi esingangeni manzi futhi okunzima kakhulu ukusiklwebha. Umcamelo we-cuira walesi sihlalo sokudlala u-Zero ufakwe iphaneli yokhuni elithwala umthwalo kuwo wonke umzimba wesihlalo, kuze kufike ku-150kg. Ingaphambili lesihlalo libuye lifakwe indawo yokubeka izinyawo, esetshenziselwa ukusekela izinyawo zakho lapho uncike emuva.
Imilenze yesihlalo yenziwe ngensimbi ewumgogodla wepulasitiki, futhi amasondo enziwe ngepulasitiki ebunjiwe eqinile, engabangi msindo lapho ihamba futhi ingashintshwa ngamadigri angu-360. Isihlalo sinesihlobo sokulala esisuka ku-90 degrees siye ku-145 degrees ukuze sikunikeze umuzwa okhululekile futhi omnandi lapho usebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 1,889,000 VND.
4. I-Dxracer Racing Pro Series OH/RV131/NR . Usihlalo Wokudlala
I-Dxracer Racing Pro Series iyisihlalo sokudlala esiyintandokazi nesithengiswa kakhulu somndeni wakwa-Dxracer okwamanje. Isihlalo sinesakhiwo esiqinile esinomklamo wesimanje futhi kanokusho. Izingxenye zesihlalo zonke zisebenzisa izinto eziphephile nezihlala isikhathi eside njengesisekelo sensimbi engagqwali futhi zifafazwe nge-powder coating, amasondo epulasitiki anenjoloba ukuze anyakaze kalula.
Isikhundla se-armrest sesihlalo se-Dxracer Racing Pro Series siklanywe ngokusekelwe ekwakhiweni okukhethekile futhi sinendawo ebushelelezi ukuze sinikeze abasebenzisi umuzwa omnandi nonethezekile lapho kufanele bathintane nesihlalo isikhathi eside ngokuqhubekayo. . Ukuphakama kwesihlalo kungashintshwa kalula phezulu – phansi noma kujikeleziswa kwesokunxele – kwesokudla ukuze kuhlangatshezwane nazo zonke izidingo zokusetshenziswa.
Isihlalo umcamelo we Isihlalo sokudlala se-Dxracer Racing Pro Series Imbozwe ngepulasitiki ye-PVC yekhwalithi ephezulu, kulula ukuyihlanza futhi ikakhulukazi ingangeni manzi, ikunikeza ukuqina okuphezulu ukuyisebenzisa iminyaka eminingi. Iza nomkhiqizo i-backrest kanye ne-headrest elungiselelwe ngokusekelwe kwijika lomzimba womuntu ohleziyo, okwenza umnikelo omkhulu ekusekeleni nasekuvikeleni umgogodla womsebenzisi.
Intengo yesithenjwa: 1,990,000 VND.
5. Isihlalo sokudlala i-BG E-01
I-BG E-01 ingenye yezinhlobo zezihlalo zegeyimu ezihlolwa kahle kakhulu umphakathi odlalayo. Kweminye imicimbi emikhulu efana ne-Dreamhack noma i-IEM cishe uzoyibona ivela, futhi uma ungumdlali wegeyimu ochwepheshile, lona umkhiqizo ophelele futhi ofaneleka kakhulu kuwe.
Ukuba nomklamo oyingqayizivele, isihlalo sokudlala BG E-01 Kunemibala eminingi ehlukene edonsa amehlo kusukela komhlophe, obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka kuya koluhlaza okwesibhakabhaka ongayikhetha ngokuya ngokuthanda kwakho. Isihlalo siklanywe ngomklamo olula ukuze ukwazi ukusisebenzisa ngezidingo eziningi ezahlukene ezingasetshenziswa ukuqondisa noma ukulala ukuze ulale lapho uzizwa ukhathele.
Izingxenye eziningi zesihlalo sokudlala se-BG E-01 zenziwe ngezinto ezihlala isikhathi eside njengemilenze yenziwe ngensimbi engagqwali yekhwalithi ephezulu engakhiqizi i-oxidize, amakhushini enziwe ngesikhumba se-PU kanye ne-mesh ukudala umuzwa othambile, obushelelezi. .uthando lapho uhlezi isikhathi eside ukuze udlale imidlalo noma usebenze. Ngaphezu kwalokho, isihlalo sibuye sibe nezindlela zokulungisa eziguquguqukayo kanye nekhono lokuhlehla cishe ngama-degree angu-180.
Intengo yesithenjwa: 1,890,000 VND.
6. E-DRA EGC204 . Usihlalo Wegeyimu
I-E-DRA EGC204 .isihlalo sokudlala Lesi ngesinye sezihlalo ezithengiswa kakhulu njengamanje ezifunwa abadlali bamageyimu ngentengo yaso nekhwalithi. Ngempahla yesikhumba ethambile ye-PU futhi kulula ukuyihlanza ngemuva kwesikhathi sokuyisebenzisa ngaphandle kokubangela ubunzima. Isihlalo sinomthwalo oqondile ofika ku-150kg ngokuphakama okulinganiselwe kwe-armrest, okulungele kakhulu abadlali ngesikhathi sokudlala isikhathi eside.
Ukwengeza, iphuzu eliyintandokazi yalesi sihlalo sokudlala esiphezulu yifreyimu yomlenze, ifreyimu ye-aluminium nemilenze, amasondo wonke aklanyelwe ukungenzi umsindo. Unganyakaza ebumnyameni ngaphandle kokwesaba ukuthikameza ubuthongo bomuntu oseduze kwakho.
Intengo yesithenjwa: 2,400,000 VND
I-athikili engenhla yi-top 6 isihlalo sokudlala ezinhle, ezidumile futhi ezithengiswa kakhulu namuhla. Ngethemba ukuthi ngalesi sihloko ungakhetha isihlalo esihle kakhulu sokudlala. Ngesikhathi esifanayo, bamba isipiliyoni sokukhetha ukuthenga isihlalo sokudlala ukuze ukhethe ukuthenga isihlalo esinezici ezihambisana nezidingo zakho.
Sữa tiểu đường Glucerna có tác dụng gì? Chế độ ăn tốt nhất cho người bị tiểu đường | Muasalebang